Ogaden News Agency (ONA) – Cali Dhaanto iyo hobolada Waayaha Cusub – Waan khaldanaa waa Geesinimo
Cali Dhaanto iyo hobolada Waayaha Cusub – Waan khaldanaa waa Geesinimo
Posted by ONA Admin	/ November 4, 2012
Waxaan si aad ah u soo dhaweynaynaa hadaan nahay bahda Warfaafinta JWXO abwaanada iyo hobolada ka soo noqday khaladkoodii, ka dib markay indhahooda ku soo arkeen dhibaatada gumaysiga uu ku hayo guud ahaan umadda Somaliyeed gaar ahaan shacabka uu gumaysto ee S.Ogadenya.
Waxaa jirta maahmaah carbeed oo odhanaysa – Khaladka oo la qirtaa waa wanaag, Isagoo laga soo noqdaana waa raganimo الاعتراف بالخطأ فضيلة والرجوع عنه قوة . Waxaa hubaal ah inay dhabarjab ku tahay dacaayadihii raqiiska ahaa ee gumaysiga uu kharashka badan galiyay ku soo noqoshada halganka fanaaniinta Waayaha Cusub iyo gaar ahaan fanaanka ku soo caan baxay dhaqankeenii Cali Dhaanto oo dhamaan TV-yada Somaliyeed laga daawado dhaantadiisa.
Qofkasta oo Somali ah waxaa saaran waajibka ah inuu kula dagaalamo gumaysiga Itobiya wixii karaankiisa ah iyo hibada uu Ilaahay siiyay. Fanka iyo hal-abuurka waa hubka 1aad ee shucuubta gobanimadoonka ah ay kula dagaalamaan gumaysiga iyagoo ku abaabulaya dadweynahooda isla markaana caalamka ku gaadhsiinaya taariikhda iyo dhaqanka dalkooda iyo inay tusaan halganka ay ugu jiraan xoriyadooda iyo dhibaatada uu ku hayo gumaysiga shacabkooda xoriyad-doonka ah. Sidaa daraadeed ayuu gumaysiga awoodiisa isugu geeyaa inuu ku kasbado fanaaniinta habkasta oo xaaraan ah. Inta uu damiirkoodu noolyahay umbaana ka badbaada.
Ugu dambayntii waxaan u hambalyaynaynaa fanaan Cali Dhaanto iyo hobolada Waayaha Cusub waxaanan leenahay kaalintii aad ku lahaydeen halganka Shacabka Soomaliyeed ee Ogadenya ay ku xaqiijinayaan Xoriyadooda way idiin banaanayd ee buuxiya.